लाइसेन्स परीक्षाको विज्ञापन खोल्ने अन्तिम तयारी | Aaja ko Shiksha
शिक्षक सेवा आयोगले यही हप्ताभित्र शिक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को परीक्षाका लागि विज्ञापन खुलाउनेगरी अन्तिम तयारी सकेको छ ।
गत वैशाखकै पहिलो हप्तामा विज्ञापन गर्ने आयोगको तयारी थियो । तर, अनलाइनबाटै फारम भर्ने व्यवस्थाका लागि परीक्षण गरिरहेको आयोगले प्राविधिक कठिनाई देखा परेपछि अहिलेसम्म विज्ञापन गर्न सकेको थिएन । अब भने प्राविधिक समस्या हटेकाले एक/दुई दिनदेखि अर्थात् (यो समाचार लेख्दासम्मको मिति १ असारदेखि) एक साताभित्रै विज्ञापन गरिने आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विज्ञापन खुलाउने विषयमै यही असार १ गते दिनभरी नै आयोगमा छलफल चलेको थियो । डा. थपलियाले आजको शिक्षासित भन्नुभयो, ‘अबको एक/दुई दिनदेखि साताभित्रै लाइसेन्सको विज्ञापन हुन्छ । हामीले अन्तिम तयारी सकेका छौं ।’
आयोगले विद्यालय शिक्षाका माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तीनै तहका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिन लागेको हो । आयोगले परीक्षा फारम अनलाइनबाटै भर्ने व्यवस्था गर्दैछ । अहिलेसम्म परीक्षार्थी जुन जिल्लाको हो, सोही जिल्लामा गई दरखास्त दिनुपर्ने बाध्यता थियो । यसो गर्दा परीक्षार्थीले शास्ती र खर्च दुबै ब्यहोर्नु परेको थियो ।